Waayeel iyo Carruur ka cabanaya waxbarasho la’aan oo banaan-bax sameeyey
Lughaya(GNA)-Dadka ku dhaqan Deegaanka Hul-Xudheenle oo ka tirsan Degmada Lughaya ee Gobolka Awdal ayaa cabasho ka muujiyey waxbarasho la’aan, iyagoo dowladda ku eeddeeyey inay ka gaabisay in dadka deegaankaa loo dhiso goobo waxbarasho.
Dadweyne isugu jira Waayeel iyo carruur oo isugu soo baxay goob banaan, ayaa warbaahinta u sheegay in dhibaatada ka jirta deegaankan ee dhanka Waxbarashaddu ay gaadhsiisantahay inay boqolaal da’yar ah oo gaadhay xilligii waxbarashada ay waayeen waxbarasho aasaasi ah.
Waxa ay intaas ku dareen inay Maamulka Dawladda ee Gobolka iyo Wasaarada Waxbarashadu ka gaabiyeen in dugsiyo waxbarasho ay halkaa ka dhisaan, waxaanay codsadeen inay dawladdu u dhisto goobo waxbarasho.
Xukuumadda Somaliland oo kamida wadamada saxeexay Barmaamujka QM ee horumarinta Waxbarashada aasaasiga ah, ayaa sanadkii 2011-ka balan qaaday inay sanadka 2016-ka uu Ilmo kasta oo waddanka joogaa uu heli doono Waxbarasho.
awdal deegaanka Somaliland WAXBARASHO	2017-03-04
Previous: RW Khayre: 48-kii saacadood ee ina dhaafay 110 qof ayaa u dhintay waxyeelada abaarta”
Next: Somaliland: Take a lesson from Somalia